HP Scanjet स्क्यानर 200, यस लेखमा छलफल गरिनेछ जो तपाईं तस्वीर राम्रो गुणस्तर प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। यसबाहेक, कार्यात्मक उपकरण को प्राप्त छवि सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ घरमा र कार्यालय दुवै।
यो स्क्यानर पूर्ण फलस्वरूप छवि गुणस्तर ग्यारेन्टी। सजिलो सञ्चालन, सुसज्जित एक सुन्दर डिजाइन छ। यो कागजात, तर पनि फोटो मात्र होइन स्क्यान गर्न सक्छन्। उत्तरार्द्ध कुनै पनि प्रकारको छैन, तर 10 × 15 सेमी आकार मेल खाने मात्र ती। तस्वीर सीधा एक मसी जेट मुद्रकमा मुद्रण वा आफ्नो कम्प्युटरमा सुरक्षित गर्न सकिन्छ। इच्छित भने, तपाईं बटन थिचेर सञ्चालन दोहोरिन सक्छ।
समावेश HP Scanjet 200 (यसको लागि मूल्य -।3हजार rubles को क्षेत्र मा) एक विशेष उपकरण आउँछ। यसलाई सजिलै स्क्यानर, सम्पूर्ण प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न फोटो, छाप्न सम्पादन र स्वचालित क्रममा आवश्यक छ। शक्तिशाली गर्न स्क्यानर युएसबी-केबल मार्फत जोडिएको छ। उहाँले धेरै सानो पदचाप छ र अधिकतम बचत संग ऊर्जा खपत। आफ्नो ठाँउ पत्ता लगाउन तालिका गाह्रो छैन त उपकरणको आयाम, साना छन्।
(यो बारे सकारात्मक समीक्षा) हिमाचल प्रदेश Scanjet 200 सेट मा के छ? बक्समा तपाईं युएसबी-केबल र सीडी को एक जोडी पाउनुहुनेछ। एक तस्बिरहरू काम गर्न आवश्यक छ, र दोस्रो तपाईं पूर्णतया कसरी उपकरण बुझ्न अनुमति दिन्छ। नियन्त्रण प्यानल मा सम्बन्धित कार्यहरु लागि जिम्मेवार छन् भन्ने केही कुञ्जीहरू छन्: पोस्ट गर्न छविमा फर्वार्ड खोज्दै, प्रतिलिपि, साथै कागजातको प्रक्रिया र PDF मा यसको स्वरूप परिवर्तन। यो उपकरण यसलाई पनि विद्यार्थी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसको सत्तारूढ मा स्पष्ट छ।
सुविधाहरू लागि, यो यन्त्र 21 सेकेन्ड को लागि छवि स्कैन कि उल्लेख गर्नुपर्छ। ढाँचा पहिचान लगभग 30 सेकेन्ड लाग्छ। तपाईं रंग फोटो स्क्यानिङ हो भने, तपाईंले ई-मेल मार्फत पछि स्थानान्तरण गर्न आवश्यक, को स्क्यान प्रक्रिया 37 सेकेन्ड लाग्छ। 1 जीबी - सबै भन्दा ठूलो फाइल Windows मा प्राप्त, मा लिनक्स वा म्याक ओएस2जीबी ओगटेको छ। उपकरण सादा कागज, मसी जेट प्रिन्टरहरू र फोटो कागज, अखबार पानाहरू, चमकदार पत्रिका लागि प्रयोग गरिन्छ जो दुवै स्क्यान गर्न सक्छन्। TIF, GIF, BMP, JPEG: त्यसपछि, स्क्यान गरिएका तस्बिरहरू, निम्न ढाँचामा भण्डारण गर्न सकिन्छ। तपाईं TIF ढाँचा चयन भने, यो पनि टिप्न र सङ्कुचन विकल्प अनुमति छ। यो अन्य मा एक रूपान्तरण गर्न, प्रारूप परिवर्तन गर्न सम्भव छ। यो स्क्यानर चार नियन्त्रण कुञ्जीहरू छ, तिनीहरूले सबै उपकरणको अगाडि छन्। भनेर पूर्णतया उपकरण संग काम स्वचालित गर्न अनुमति दिन्छ सफ्टवेयर पनि छ।
स्क्यानर बारेमा 2.5 किलोवाट को शक्ति खपत, न्यूनतम खपत 0.5 वाट छ। उपकरण2किलो वजन।
HP Scanjet उपकरण 200 (निर्देशन समावेश गरिएको छ) संग मांग मा हाल धेरै अपरेटिङ सिस्टम उपयुक्त छ। हामी विन्डोज सफ्टवेयर र म्याक ओएस र लिनक्स बारेमा कुरा गर्दै छन्।
अन्य कुनै पनि उपकरण जस्तै, स्क्यानर यसको आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छ। हामीलाई तिनीहरूलाई जाँचौं। यसलाई यन्त्र सस्तो छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ लाभ बीचमा, USB-बंदरगाहों को मद्दतले बिजुली, क्रमशः, तार परिवर्तन गर्न धेरै सजिलो छ खपत, र यो भन्दा हल्का र संकुचित छ। प्रयोगकर्ता नै समय व्यवस्थापन बहु फोटो को साथ प्रक्रिया यो गर्न, तपाईं एउटा कुञ्जी प्रयोग गर्न आवश्यक छ भनेर सरल छ को रूप मा, स्क्यान को उत्कृष्ट गुणस्तर उल्लेख जो समीक्षा, लेख्न। यो दायरा चुपचाप र चाँडै काममा सबै उपकरणहरू एक मोडेल वर्णन - कुनै अपवाद छ। आवरण, फरक लुप छ यसलाई तेर्सो स्थिति मा स्थित छ।
को को बुरा HP Scanjet स्क्यानर 200 को लागि रूपमा, त्यसपछि, जस्तै प्राविधिक विशेषताहरु देखि स्पष्ट भएको छ, यन्त्र जब अन्य समकालीन मोडेल तुलनामा सुस्त छ। सबै कार्य, शीर्ष मोडेल प्रस्तुत गर्दै छन्, धेरै ढिलो छ। किन धेरै उपभोक्ताहरु यो उत्पादन कागजातहरू को ठूलो मात्रा काम लागि उपयुक्त छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् भन्ने छ। यसरी यो एउटा सानो सुविधा ध्यान दिनुहोस् आवश्यक छ: तिनीहरूले कडा उज्ज्वल रंग स्क्यानिङ संग फीका। यसबाहेक, स्क्यानर को सफ्टवेयर प्रत्येक कम्प्युटर लागि, यसको न्यूनतम आवश्यकताहरू ज्ञात छैन, यो भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ त्यसैले सेट छ, यो एक उपकरणको लागि उपयुक्त छ।
पहिले नै माथि उल्लेख, र यो स्पष्ट छ को रूप मा, स्क्यानर चार मुख्य बटनहरू छन्। बटन "स्क्यान" मा क्लिक गरेर छविहरू र विभिन्न कागजातहरू ह्याण्डल कि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। "प्रतिलिपि" बटन छवि तस्वीर को लागि, तर पनि मुद्रण गर्न मात्र होइन जिम्मेवार छ। तेस्रो बटन इमेल मार्फत एक स्क्यान पठाउनका लागि जिम्मेवार छ, त्यसैले तिनीहरू पत्र र SENT संलग्न पृष्ठ को प्रक्रिया पछि तुरुन्तै। PDF प्रारूप मा स्क्यान लागि जिम्मेवार छ जो चौथो बटन, एकदम कार्य मा स्पष्ट छ। यो कागजात प्रकृया मा लगी भएको छ, र त्यसपछि पीडीएफ ढाँचामा बचत गर्नुहोस्। तपाईं उपकरण सुरु गर्नु अघि, तपाईं यसलाई आफ्नो कम्प्युटरमा काम गर्छ जो सँग सफ्टवेयर स्थापना गर्नुपर्छ। डाउनलोड भएपछि, दुई प्रतीक डेस्कटपमा देखिन्छन्। प्रतीक आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्नेछ। तिनीहरूलाई एक क्लिक गरेर कागजात स्क्यान गर्न यो मुद्रण वा यसलाई सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। को स्क्यान प्रक्रिया सुरु गर्न, तपाईं त तपाईं संवाद बक्स मा प्रदर्शन गरिने निर्देशनहरू पालना गर्न आवश्यक भनिन्छ जो "स्क्यान" प्रतिमा, क्लिक गर्नुपर्छ। तपाईं प्रतिलिपि बनाउन चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं उपयुक्त बटन मा क्लिक गर्न, त्यसपछि कागजात स्क्यान छन् र मुद्रक पठाइने आवश्यक छ।
ग्राफिक्स कार्ड को विकल्प: सबै कि सरल के
कसरी आफ्नो पीसी (Windows 7) गर्न कराओके लागि माइक्रोफोन जडान गर्न?
आँटा झोला - गोप्य मिठाई कृति
घरमा नाकहरूमा गोलाकार कसरी लागू गर्ने?